कमाएको पैसा बचाउन सक्नुभएन ? जान्नुहोस् बचाउने मन्त्रहरु | latestnepali.com
कमाएको पैसा बचाउन सक्नुभएन ? जान्नुहोस् बचाउने मन्त्रहरु
आफ्नो कमाइबाट नियमितरुपमा बचत गर्न सक्ने हो भने गरिब मानिस पनि धनी बन्न सक्छ । तर, २/४ हजार बचत गरेर के नै हुन्छ र ? भन्ने मानिस जुन अवस्थामा छ, त्यहाँभन्दा माथि उठ्न निकै कठिन हुन्छ ।
आजको स-सानो बचतले भोलि तपाईलाई ठुल्ठुला आर्थिक भारबाट जोगाउन सक्छ । त्यसैले आफ्नो कमाइबाट बचत गर्नुहोस् ।
तपाईं जति कमाउनुहुन्छ पहिला त्यसको हिसाब गर्नुस् । र, आफ्नो आम्दानीबाट कति रुपैयाँ बचत गर्ने ? त्यो यकिन गर्नुहोस् । म यति रुपैयाँचाहीँ बचाउँछु भनेर तपाई लाग्नुभयो भने मात्रै तपाईंले फजुल खर्च कटौति गर्न सक्नुहुन्छ ।
समयलाइ यसरी प्रयोग गर्छन् स्टार धिरज राई, अब संसार घुम्न बाँकी रहेका देश पनि घुम्दैछन् भिडियो